13 Kachasị Akpa Akpa & Azụmaahịa kacha mma na 2019 site na Nordstrom, Staud, & More - Ụdị
Azụmaahịa Black Friday na obere akpa 13 ị gaghị agbaghara: Nordstrom, Tory Burch, Rebecca Minkoff
Splurge * na * chekwaa.
Foto Claudio Lavenia/Getty
N'ime afọ nke ọhụrụ ọhụrụ, na -ebu ọhụrụ Ọ-akpa dị ka baajị nke nsọpụrụ. Mana ọ bụrụ na gị, dị ka anyị, enweghị ego na -enweghị njedebe iji fesa na akpa onye nrụpụta ọhụrụ, mgbe ahụ anyị nwere obi ụtọ ịkekọrịta na ọtụtụ ụdị ụdị bidoro dị ịtụnanya. Black Friday Akpa aka na -emeso nnukwu ego.
Ọ bụrụ na ị na -eche ihe anyị na -eche (gụọ: otu nzọụkwụ dị nso na ịnweta Chanel vinteji a na -adịghị ahụkebe), gụkọọ kpakpando gị nwere ihu ọma n'ihi na anyị achịkọtara akpa akpa akpa Black Friday iri na atọ kacha mma ịzụ ahịa ugbu a. Ma ọ bụrụ na ị na-enwe agụụ na-ewu ewu Chloé crossbody, tote ọrụ ọhụrụ ị ga-ebu ruo mgbe ebighi ebi, ma ọ bụ otu n'ime atụmatụ Staud na-ewu ewu mana anaghị adịte aka, zụọ ahịa kacha mma 2019 Black Friday obere akpa ebe a.
Site n'ikike ika 1/13
Akpa obere akpa Mansur Gavriel
Nordstrom ejirila ụfọdụ onyinye dị ịtụnanya gọzie anyị n'afọ a mana ọkachasị na ngalaba akpa aka. Taa, ị nwere ike ịchọta ụdị ihe nketa dịka Gucci, Burberry, na Chloé n'akụkụ ndị na-emepụta oge dị ka Wandler na Loewe maka obere. Akpa akpa Mansur Gavriel na -acha ezigbo akpụkpọ anụ na -amasị anyị, na -efu 33%.
$ 795 Nordstrom Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 2/13
Tory Burch Ella Agba-ngọngọ Logo Tote
Wepu 30% gbanyụọ akpa akpa Tory Burch na iwu niile karịrị $ 250+ yana koodu THANKS site na Nọvemba 25 ruo Disemba 3.
$ 358 Tory Burch Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 3/13
Marina Raphael M'O Nanị Sienna Crochet Suede Bag
Mechie ọnọdụ nrụpụta gị site n'ịzụ ahịa a na-ekwukarị gbasara akpa aka mmebe okomoko nke oge na Moda Operandi. Bilie ụdị 50% dị ka Danse Lente, Gu_De na Cesta mkpokọta, wee jiri koodu X30 nweta ire 30% ọzọ. Ee, ị gụrụ ya nke ọma.
$ 1,995 Operandi Ejiji Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 4/13
Akpa Ifuru Shrimps Shelly Beaded
Farfetch bụ ebe mgbaba maka ihe niile na -aga n'ihu, mana nhọrọ nke akpa aka ndị nrụpụta pụtara ìhè n'ezie - dị ka akpa a na -achọ mma nke sitere na Shrimps. Maka Black Friday, onye na -ere ahịa na -enyekwu 30% akpa akpa ego. Echefula itinye koodu FFX30 na ndenye ọpụpụ.
$ 695 mgbakasị ahụ Zụta ugbu a
ọnụahịa nke iwepụ ntutu laser
Site n'ikike ika 5/13
Akpa Yuzefi Daria
Ndị enyi gị ga -enwe anyaụfụ mgbe ha hụrụ ka ị na -ebu akpa Yuzefi ọhụrụ a. Zụọ akpa akpa a na -achọsi ike nke ukwuu site na ụlọ ahịa Shopbop na -ere ahịa Black Friday ebe echiche na -aga ịchekwa 'anaghị ada ụda karịa. Nweta karịa 15% kwụsịrị iwu karịrị $ 200, gbanyụọ 20% karịa $ 500, yana 25% gbanyụọ iwu karịrị $ 800 yana koodu MORE19 na ndenye ọpụpụ.
$ 470 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 6/13
Akpa Kate obere ịwụ
Maka akpa aka na njigide nwere oke egwu, Rebecca Minkoff kpuchie gị. Na Nọvemba 28 ị nwere ike nweta 25% iwu niile karịrị $ 100, yana 30% gbanyụọ iwu $ 250+ site na Nọvemba 29 ruo Disemba 1.
$ 248 Rebecca Minkoff Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 7/13
Onye nchịkwa Dinky Crossbody akpa Akpụkpọ anụ
A na -amata akpa nchịkwa n'otu ntabi anya na ire Black Friday nke ika nwere ezigbo ọmarịcha azụmahịa. Anyị na-ekwu ihe ruru 50% gbachapụrụ agbachasị agbachasị, satchels, nkwojiaka, na akpa ahụ nwere koodu MORE30. Kedu ihe ị ka na -eme ebe a?
$ 295 Onye nchịkwa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 8/13
Akpa Ubu Akpụkpọ anụ Chloé Drew Bijou
Ọ bụrụ na ịfuru ya: ire ere nke Outnet bidoro n'isi afọ a - anyị na -ekwu okwu na Nọvemba 19 n'isi - mana echegbula onwe gị nke ukwuu maka ịhapụ ihe ọma. Oge kacha mma iji kpoo akpa ndị nrụpụta ego dị ọnụ ala site na ụdị dị ka Chloe, Valentino, Staud, Stella McCartney, Cult Gaia, na Proenza Schouler bụ mgbe a na-echekwa ahịa ahụ. Na ị nwere chi ọma n'ihi na na Nọvemba 29, The Outnet na -enye mgbakwunye BLACKFRIDAY nke 20% na ndenye ọpụpụ.
$ 2,190 Ihe ntanetị Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 9/13
Staud Shirley Terry akpa
Nweta akpa Staud maka 25% gbanyụọ saịtị niile site na Nọvemba 27 (elekere isii nke ụtụtụ PST) ruo Disemba 3 (12 pm PST) - akpa terry a mara mma gụnyere. Ego mbelata ahụ ga-adị ire na akpa aka ya niile kacha ere (chee echiche ụdị dị ka Bissett na Ọnwa) na ngwaahịa ire ere. Echefula iji koodu BFCM25 na ndenye ọpụpụ.
$ 250 Staud Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 10/13
Calpak na-ere igbe mara mma nke na-arụ ọrụ yana akpa njem, gụnyere Luka Duffle a (nke meriri Akara nkwado nke Oprah afọ a). Akpa a na ihe ndị ọzọ nwere ike ịbụ nke gị maka 15% gbanyụọ n'oge ire Black Friday nke ika ahụ, site na Nọvemba 27 ruo Disemba 1.
$ 98 Calpak Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 11/13
Ọ bụrụ na ị na-achọ akpa aka na ngwongwo akpụkpọ anụ na-adọrọ adọrọ (mana n'ụdị oge adịghị obere), Furla na-enye 25% kwụsịrị ịzụrụ ihe niile-gụnyere ire ere. Enweghị mwepu.
$ 448 Furla Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 12/13
Akpa akpa Chanel Purple Velor
Ọ bụrụ na ị na -achọ ị nweta akara dị ịtụnanya na akpa ndị nrụpụta vinteji - chee njigide, akpa, na akpa ejiri aka dị elu nwere arịrịọ ozugbo a na -amata ngwa - yabụ atụfula ihe na -aga gburugburu na -abịa gburugburu ire Black Friday. Akara dị ka Chanel, Louis Vuitton Dior, Gucci, ma ọ bụ Hamis (gbakwunyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ) ga -anọ na 20% na -adịghị ahụkebe site na Nọvemba 28 ruo Disemba 2.
$ 3,950 Ụwa na-atụgharị atụgharị Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 13/13
Akpa Belt Senreve Aria
Senreve na -eme akpa dị mma, na -arụ ọtụtụ ọrụ - ọbụlagodi Priyanka Chopra bụ onye na -akwado ya - enwere ike eyi ọtụtụ ụdị dike ya n'ụzọ dị iche iche. Malite na Nọvemba 25 ruo Nọvemba 30, onye ọ bụla zụrụ akpa Aria ma ọ bụ Coda Belt ga-enweta eriri Chain n'efu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-emefu $ 500+, ị ga-enweta obere akpa mgbaaka ma ọ bụ Carte Folio (ọnụ ahịa $ 145-175).
agịga egbugbere ọnụ tupu na mgbe egbugbere ọnụ dị gịrịgịrị
$ 395 Senreve Zụta ugbu a
kedu ihe mere Britain ji nwee nchekwa
bronzer kacha mma maka akpụkpọ anụ
ego ole ka a ga -atụnye onye na -edozi isi na ekeresimesi